(XOG+Falanqeyn)-Maxay tahay sababta Bulshada Somaliyed uga danqadeen Xirista Qalbi dhagax | SOMALI SUN |
(XOG+Falanqeyn)-Maxay tahay sababta Bulshada Somaliyed uga danqadeen Xirista Qalbi dhagax
Sep 4, 2017 - Aragtiyood
Magaciisu waa Cabdikariim Sheekh Muuse, waxaana lagu naanaysaa Qalbi-Dhagax , taas oo malaha loogu bixiyey calool adeygiisa, balse toddobaadkan wuxuu ruxey quluubta Soomaalida intooda badan, isaga oo noqdey shaqsiga loogu hadal heyn badanyahay baraha bulshada iyo qalabka warbaahinta intuba.
Haddii ay kuu tahay markii koowaad ee aad maqlaysid magaca Qalbi Dhagax, waa sargaal sare oo ka tirsan jabhadda ONLF oo sida la sheegay inta dowladda Soomaaliya qabatay, kadibna ku wareejisey Itoobiya.
Ma ahayn nin horey caan oga dhex ahaa Soomaalida, marka laga reebo dadka ay isku qaddiyadda yihiin iyo laamaha sirdoonka dalalka geeska Afrika qaarkood oo laga yaabo in ay isha ku hayeen dhaqdhaqaaqiisa.
23-dii illaa 27-dii Agoosto, 2017
Wax kasta waxa ay isbadaleen taariikhda markii ay ahayd 23-dii bishii Agoosto ee lasoo dhaafay, xilligaas oo Cabdikariim uu ka duulay magaalada Muqdisho, kana degay Gaalkacayo, si uu halkaasi uga soo qaado wiil yar oo qaraabadiisa ka mid ahaa sababo caafimaad awgood.
Sida uu BBC-da u xaqiijiyey Maxamed Daahir oo ka tirsan mas’uuliyiinta jabhadda ONLF oo ku sugan magaalada Johannesburg, Qalbi Dhagax waxa uu Gaalgacayo tagay galinkii dambe ee maalintaas, isla habeenkiina waxaa qabtay ciidammada Galmudug.
Waxaa dhacday in dadka deegaanka magaalada Gaalkacayo, gaar ahaan dhanka Koonfureed ay aad ugu dadaaleen in Qalbi Dhagax lasoo sii daayo, balse waxaa markii dambe la wareegay ciidammada Nabad Suggida Qaranka Soomaaliya ee NISA, kuwaasi oo usoo duuliyey magaalada Muqdisho.
“Markii ay NISA la wareegtay anaga neefta ayaa naga soo fuqday, waxaanan u qaadanay in NISA ay u dhaanto Galmudug, oo uu ku nabad gali doono gacanta dowladda Federaalka oo aan kalsooni aad u badan ku qabnay, balse taas ma dhicin, oo waxaa dhacday nasiib darradii ugu weyneyd oo ah in ninkii loo gacangaliyo Itoobiyo” ayuu yiri Maxamed Daahir.
Markii Muqdisho la keenay ayaa waxaa jirey iskudayo ay qeyb ka ahaayeen mas’uuliyiin dowladda federaalka oo ku saabsan in lasoo daayo Qalbi Dhagax, balse waxa ay illo wareedyo kala duwan xaqiijiyeen in taariikhda markii ay ahayd 27-di Agoosto diyaarad loo saaray Itoobiya sida ay sheegtay jabhadda ONLF oo war qoraal ah soo saartay.
Mardambe waxaa soo shaac baxay muuqaal la sheegay in laga soo duubay Qalbi Dhagax oo jeebeysan, balse BBC-da ma xaqiijin karto goobta laga duubay iyo waqtiga iyo waliba cidda duubtay. Waxaa muuqaalkan lagu faafiyay shabakada Dalsoor.
Waa Kuma Qalbi Dhagax ?
Qalbi Dhagax waxa uu muddo dheer ka mid ahaa jabhadda ONLF, xilal kala duwan ayuuna kasoo qabtay, xilkii ugu dambeeyey ee uu ka hayay waxa uu ahaa hoggaanka arrimaha gudaha iyo xubin ka tirsan guddiga fulinta ee ugu awoodda badan jabhadda sida ay noo xaqiijiyeen xubno ka tirsan ONLF.
Sidaasi darteed wuxuu noqonayaa xubinkii ugu sarreeyay ee ONLF ka tirsan oo u gacangala Itoobiya, balse ma ahan kan kaliya ee Soomaaliya gudaheeda inta laga qabto loo wareejiyo Itoobiya.
Ilaa 5 sargaal oo kale oo sarsare ayaa 20kii sano ee lasoo dhaafay laga qabtay gudaha Soomaaliya, kuwaas oo laga qabtay magaalooyinka Hargeysa, Boosaaso, Gaalkacayo iyo Guriceel sida ay sheegeen ONLF. Waxaa sidoo kale jirey dad jabhadan ka tirsanaa balse aanan wax mas’uuliyad haynin jabhadan oo iyagana la dhiibay.
Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ayay jabhadda xaqiijisey in uu ka mid ahaan jirey ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya, isaga oo sannadkii 1984-tii ku dhaawacmay magaalada Galdogob dagaal Soomaaliya iyo Itoobiya dhexmaray.
Jawaabta Dowladdaha Soomaaliya iyo Itoobiya
Dowladda federaalka Soomaaliya wali wax jawaab rasmi ah kama aysan bixinin qabashada iyo dhiibista Qalbi Dhagax marka laga reebo taliyaha NISA Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) iyo Ra’isulwasaare Xasan Cali Kheyre oo mar meel fagaaro ah lagu weeydiiyey sheegay in ay ka gaabsanayaan arrinka.
“Waa arrin xasaasi ah, mana jirto cid hadda ka hadli karta, waxaanan ka hadlaynaa waqtiga ku habboon” ayuu yiri Sanbaloolshe oo u muuqday in uu xaqiijinayay in ay dowladda wax ka ogtahay arrinka Qalbi Dhagax.
Wixii markaas ka dambeeyay ma jirto cid ka tirsan madaxda sare ee laanta fulinta oo arrintan ka hadashay, isku dayo faro badan oo aan samaynay, wax jawaab ah lagama bixinin.
Warbaahinta dowladda sida wakaaladda wararka, Raadiyoow Muqdishoow iyo Taleefishinka ayaan iyaguna sooba hadalqaadin dhiibista Qalbi Dhagax xili warka ugu weyn ee warbaahinta kale ay tabineyso uu kaas yahay.
Hase yeeshee dowladda Itoobiya ayaa markiiba ka hadashay Qalbi Dhagax waxayna xaqiijisey in ay gacanta ku dhigtey ninkaasi, waxaana intaasi lagu daray in dowladda Soomaaliya ay gacan ka siisay sida uu idaacada VOA qeybeetda Amxaariga u sheegay Wasiirka Isgaarsiinta Itoobiya Negeri Lencho.
Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku tilmaamay khiyaano qaran oo la galay in la dhiibo qof Soomaali ah.
Xildhibaan Sakariye Xaaji Maxamuud oo BBC-da la hadlay ayaa yiri “Haddii aan nahay baarlamaanka Soomaaliya waan baaraynaa arrinkan, ciddii ay ku cadaatana sharciga ayaa lala tiigsanayaa”.
Balse xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow oo isna la hadlay BBC-da ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ay dowladda Soomaaliya ka caawiyaan la dagaalanka Alshabaab, ayna suurtogal ahayn in cid Itoobiya cadaw ku ah lagu magangaliyo Soomaaliya.
Dad aad u badan oo isugu jira ururada bulshada rayidka, qurba-joogta, aqoonyahannada iyo shacabka qeybihiisa kala duwan ayaa dareenkooda ka dhiibtay, waxayna cambaareeyeen waxa dhacay.
Baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter-ka ayaa ugu daran meelaha ugu badan ee lagu hadal hayo, muddo labo toddobaad ka badana Qalbi Dhagax waa moowduuca ugu weyn ee lagu faaqidayo barahaasi, iyada oo dadka qaarkood ay sawirkiisa saarteen ciwaankooda.
Maxay tahay ONLF ?
Waa jabhad la asaasay sannadkii 1984tii oo sheegta inay u halganta xaqa ismaamulista ama madaxbannaanida dadka iyo dhulka Soomaaliyeed ee ay Itoobiya maamusho.
Jabhadda Xoreynta Ogaden ayaa waxa ay muddo dheer la dagaalamaysay dowladda Itoobiya, waxaana jira weeraro badan oo dowladda Itoobiya ay ku eedeysay jabhadan.
Dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay in la wiiqay awooddii ONLF ee gudaha.
Waxaa jabhadda guddoomiye ka ah Admiral Maxamed Cumar Cusmaan oo horey u ahaan jirey taliyihii ciidammada badda Soomaaliya,
Sannadihii dhawaa waxa ay dirir u dhaxaysay ciidamadda jabhadda iyo kuwa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya,
ONLF waxa ay dowladda Itoobiya iyo dowlad deegaankaba ku eedeysaa xadgudubyo baahsan oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, eedeymahaas oo markasta ay beeniso dowladda Itoobiya.
Dastuurka muxuu ka qabaa?
Aragtida koowaad ee la’isku wada raacsanyahay ayaa ah in aysan meelna sharciga Soomaaliya kaga qorneyn in qof Soomaali ah oo gudaha dalka ku sugan loo dhiibo dowlad kale.
Qodobka 36-aad ee dastuurka ayaa si kooban oga hadlaya isu celinta eedeysanayaasha iyo dambiilayaasha ee dalalka kale, wuxuuna shuruud ka dhigayaa in uu marka hore jiro heshiis ka dhaxeeya labada dal in ay isu celiyaan maxaabiis, isu celintana ay ahaataa mid waafaqsan shuruucda caalamiga ah.
Ma jiro wax heshiis ah oo la ogyahay oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya oo ay isugu celiyaan eedeysanayaal ama maxaabiis, hase yeeshee 22-kii bishii Luuliyo ee sannadkan 2017-ka ayaa dowladda Soomaaliya waxay lasoo wareegtay maxaabiis gaaraysa 114 oo Soomaali ah oo ku xirnaa xabsi Itoobiya ku yaalla , waxaana dadkaasi oo dambiyo yaryar loo heystay ,
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ololaha doorashada ku galay illaalinta xuquuqda asaasiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, wuxuu ololihiisa iyo balanqaadyadiisa ku salaysnaayeen waddaniyad iyo illaalinta sharafta iyo karaamada Soomaaliya.
Waana sababtaasi tan ugu badan ee ay dadka cuskanayaan marka ay aragtiyadooda dhiibanayaan, iyaga oo ku baaqaya in madaxweynaha uu arrintan ka hadlo, wixii laga qaban karana uu ka qabto.
Waxaa kale oo jira baaqyo loo dirayo labada aqal ee baarlamaanka in ay fadhi ka yeeshaan Qalbi Dhagax , go’aamana kasoo saaraan, laanta fulintana ay ku qasbaan in ay ka jawaabto sida ay wax u dhaceen.
Dadka baaqa u direy madaxda dowladda waxaa ka mid ah xaaska Qalbi Dhagax oo lagu magacaabo Khadro Maxamed Cabdi xili ay la hadashay warbaahinta, waxayna ka dalbatay madaxweynaha iyo Ra’isulwasaaraha in ay xoriyadiisa dib ugu soo celiyaan seygeeda.